राष्ट्रियसभामा अर्थमन्त्रीको जवाफ ‘बजेट वायुपङ्खी घोडा पनि हैन, कछुवा पनि छैन’
नापतौल तथा गुणस्तर विभागद्वारा रुपन्देहीका पेट्रोलपम्पहरुको अनुगमन
“गुणस्तर ठीक, सुरक्षा उपकरण अव्यवस्थित”
काभ्रे पाँचखाल नगरपालिमा भेटियो लिच्छविकालीन भग्नाबशेष
काठमाडौँ, जेठ १९ गते । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट मुलुकको आवश्यकता र सरकारको लक्ष्य अनुसारको भएको बताउनुभएको छ । वार्षिक बजेटमा राष्ट्रियसभामा छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले सङ्घीयताको मर्म अनुसार नै भएको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट वायुपङ्खी घोडा जस्तो पनि नभएको र कछुवाको गतिमा पनि नरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘यो बजेट वायुपङ्खी घोडा पनि हैन, कछुवाजस्तो पनि छैन । हाम्रो आफ्नै गति हो । त्यही गतिमा बजेट आएको छ । हाम्रो लक्ष्य भनेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हो । त्यति लक्ष्य पनि राखिएन भनेचाहिँ कछुवाकै गति हुन्छ ।’
राष्ट्रियसभामा जवाफका क्रममा खतिवडाले चालु वर्षको बजेट र अहिलेको बजेटको आकार लगायतका विषयको तुलना स्याउ र सुन्तताजस्तै रहेको बताउनुभयो । उहाँले चालु वर्षको बजेटको संशोधित अनुमानको तुलनामा प्रस्तुत बजेट ४० प्रतिशत ठूलो आकारको रहेको बताउनुभयो ।
राजस्वमा आउँदो वर्ष ३५ प्रतिशत बढी हुने अाँकलन गरेर लक्ष्य लिइएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । उहाँले करको अधिकार स्थानीय तहसम्मलाई दिइएको बताउनुभयो । उहाँले कटाक्ष गर्दै राजस्वमा लिइएको फड्को हावामा टेकेको खुट्टा नभई भुँइमै टेकेको बताउनुभयो ।
‘निजी क्षेत्रमैत्री बजेट’
निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको भन्ने सांसदको आरोप खण्डन गर्दै अर्थमन्त्रीले पहिलो पटक बजेटमा उद्योग क्षेत्रलाई संरक्षण दिइएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले कम्पनी मोडलमा लैजानु, नाफाको लगानीमा कर मिनाहा गर्नुले लगानीको वातावरण बनाउने विश्वास व्यक्त गनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रबिना समावेशी अर्थतन्त्र हुन नसक्ने सांसदको भनाइमा प्रतिप्रश्न गर्दै भन्नुभयो ‘राज्यको भूमिका नभई कसरी समावेशिता हुन्छ ? राज्यको भूमिका नै नभए निजी क्षेत्रले मात्र कसरी समावेशिता बनाइदिन्छ ? यस्तो ज्ञान मलाई पनि चाहियो । अर्थमन्त्रीको इच्छाले निजी क्षेत्र खुम्चन सक्दैन । संवैधानिक व्यवस्थाले पनि दिँदैन ।’
सङ्घीयताको भावना अनुसार बजेट
जवाफका क्रममा अर्थमन्त्रीले सङ्घीयताको मर्मविपरीत बजेट ल्याइएको भन्नु गलत भएको बताउनुभयो । उहाँले एउटै बजेटले खोजे र सोचेजस्तो अधिकार निक्षेपण भएन भन्दै सङ्घीयताविरोधी बजेट भन्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । अर्को वर्षदेखि प्रदेश र स्थानीय तहलाई निक्षेपण हुने बजेट विल्कुल फरक हुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीले भएका कानुनमै टेकेर बजेट व्यवस्थापन गरेको हो । त्यही कानुन हेरेर नै बजेट विनियोजन भएको हो । त्यो कानुन बनाउनेमध्ये धेरै यहाँ नै हुनुहुन्छ । संसद्ले बनाएको कानुननमा रहेर बजेट दिएको हो । यदि ५० प्रतिशत रकम तल नै पठाउने व्यवस्था गर्नुभएको भए त्यही हुन्थ्यो ।’
अर्थमन्त्रीले राजस्व र खर्चको बाँडफाँड पूर्णत नभए पनि व्यवस्थापन गर्दै जाने विषय भएको बताउनुभयो । पुनःनिर्माणको खर्च, तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका निकायको खर्च समेत गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयको बजेट ठूलो देखिएको अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभयो ।
‘सामाजिक सुरक्षा मेरै डिजाइन’
अर्थमन्त्री खतिवडाले चुनाव लगत्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढाएको भन्ने प्रतिपक्ष दलको अनावश्यक चिन्ता भएको बताउनुभएको छ । खतिवडाले धेरै चिन्ता नलिन पनि प्रतिपक्षीलाई आग्रह गर्नुभयो ।
जवाफ दिँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘समाजिक सुरक्षा २०५१ मा मनमोहन अधिकारीले ल्याउँदाको एउटा डिजाइनर म पनि हुँ । यहाँ उपस्थित केही माननीयलाई पनि यो विषय जानकारी छ । हाम्रो कार्यक्रम हो यसलाई छाडिन्न । चिन्ता नगर्नुस् । सामाजिक सुरक्षाका दायरा फेरिएका छन् । यही हेरेर स्वास्थ्य बीमालाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ । नगर्दै दिने कुरामा पर्खनुस् । हेर्दै जानुस्, स्वामित्व र जिम्मेवारी लिन्छौँ । यसमा धेरै चिन्ता नलिनुस् ।’
‘करमा लिएको नीति गलत’
अर्थमन्त्रीको जवाफअघि नेपाली काँग्रेसका सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले करमा सरकारले लिएका नीति गलत भएको बताउनुभयो । देवले निजी क्षेत्रप्रति सरकारको नीति समेत गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो । कार्यक्रममा प्राथमिकता नभएको भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ठूलो रकमको बजेट किन आवश्यक भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पर्शुराम मेघी गुरुङले दुई वर्षमा साक्षर मुलुकको घोषणा, पाँच वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर दोब्बर बनाउने विषय सकरात्मक रहेको बताउनुभयो । गुरुङले हालको केन्द्रिकृत प्रणालीलाई सङ्घात्मक रूपमा रुपान्तरण गर्दा एकैपटक सबै विषय मिल्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले सुुकम्वासीलाई लालपूर्जा नदिए त्यसविरुद्ध आफू अनशन बस्ने चेतावनी सदनमा दिनुभयो ।
नेकपाकै दीननाथ शर्माले बजेट सन्तुलित र यथार्थपरक रहेको बताउनुभयो । शर्माले थोरैमात्र नयाँ कार्यक्रम भए पनि विगतका कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई बजेटले जोड दिएको बताउनुभयो । उहाँले ३३ प्रतिशत बजेट प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइनु सकारात्मक नै भएको बताउनुभयो । रोजगारी सिर्जना, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था सकरात्मक रहेको शर्माले बताउनुभयो ।